Uhuru Kenyatta oo burcad ku tilmaamay garsooreyaasha maxkamadda sare - BBC News Somali
Image caption Madaxweynaha dalka Kenya, Uhuru Kenyatta
Madaxweynaha dalka Kenya, Uhuru Kenyatta oo dib u doorashadiisa ay waxba kama jiraan ka soo qaaday maxkamadda saree ee Kenya ayaa mar uu ka hadlayay suuqa Burma ee magaalada Nairobi waxaa uu guddomiyaha maxkmadda sare, David Maraga iyo garsooreyaasha maxkamad ku tilmaamay kuwa ''burcad ah''.
Uhuru ayaa markii lagu dhawaaqay go'aanka maxkamadda sheegay in uusan ku qanacsaneyn go'aanka maxkamadda, balse uu ixtiraamayo, waxaana uu ku baaqay in nabadda laga shaqeeyo. Uhuru Kenyatta ayaa u muuqday qof ka careysan go'aanka maxkamadda sare, waxaana ku xigeenkiisa Wiliam Ruto uu sidoo kale sheegay in afar qof oo uu ula jeedo garsooreyaashii xukmiyay go'aanka aysan bedeli karin go'aanka malaayiin shacab ah. Ruto ayaa intaa ku daray in markale ay diyaar u yihiin doorasho.
Sidoo kale Kipchumba Murkomen oo ah mudane katirsan aqalka sare ee Kenya oo isla goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in haddi mucaaradka NASA ee uu hogaamiyo Raila Odinga ay dalbadaan in la kala diro guddiga doorashada, ay iyaguna meesha ka saari doonaan garsooreyaasha maxkmadda sare.
Image caption Garsooreyaasha maxkmadda sare ee Kenya
Guddoomiyaha maxkamadda ugu sarraysa Kenya David Maraga ayaa sheegay in ay ogaadeen in wax isdabomarinno ay hareesay doorashada, wuxuuna amray in 60 maalmood gudahood lagu qabto doorasho kale.
Mucaaradka Kenya ayaa qaadacay natiijada doorashada, waxaana ay shegeen in la jabsaday hannaankii combiyutarada guddiga doorashada. Go'aanka maxkmadda sare ee Kenya ayaa ah mid ku cusub taariikhda Kenya iyo qaarada Afrika.